Tammy Abraham oo sheegay kooxda uu doonayo inay ku wajahaan wareega 16-ka ee tartanka Champions League – Gool FM
(London) 11 Dis 2019. Weeraryahanka Chelsea ee Tammy Abraham ayaa wuxuu xaqiijiyay in kooxdiisa ay diyaar u tahay inay la ciyaarto kooxaha adduunka ugu fiican.
Si gaar ah Tammy Abraham ayaa wuxuu tilmaamay sida uu u doonayo inuu kula ciyaaro kooxda Barcelona garoonkooda Camp Nou.
Blues ayaa u gudubtay wareega 16-ka ee tartanka Champions League, kaddib markii ay xalay kaga adkaadeen 2-1 kooxda reer France ee Lille, kulan xiiso badan ay ku wada ciyaareen garoonka Stamford Bridge.
Tammy Abraham ayaa kaddib kulankii xalay wuxuu u sheegay warbaahinta in kooxdiisa ay diyaar u tahay inay la ciyaarto kooxaha adduunka ugu fiican, wuxuuna yiri:
“Waxaan dooneynaa inaan la ciyaarno kooxaha adduunka ugu fiican, iyo inaan ku ciyaarno garoomada adduunka ugu fiican”.
“Ma jirto cabsi, waxaan diyaar u nahay koox kasta, waxaan jeclaan lahaa inaan ku ciyaaro Camp Nou, ama meel aanan hore ugu ciyaarin”.
Waxaa la soo warinayaa inay Chelsea ay suurtogal tahay inay wajahdo xaalado aad u adag marka loo fiiriyo isku aadka wareega 16-ka Champions League, waxaana suurtogal ah inay ku aado midkood kooxaha Barcelona, ​​Juventus, Paris Saint-Germain, ama Bayern Munich.